I-Xiaomi Vacuum 2 ye-348 euros kunye nezinye ii-Singles zoSuku kwiTomTop | Iindaba zeGajethi
I-Xiaomi yinkampani ebhenkmark kwinqanaba lobuchwepheshe kwiindawo ezininzi, kwaye ukucocwa kwasekhaya akunakuba kuncinci. Sele isungule iinguqulelo ezimbini zerobhothi yokucoca, kodwa asikaze siyibone ngexabiso elinomtsalane ngaphambili. Sikuzisa esandleni seTomTop esona sibonelelo silungileyo Xiaomi Umshini 2 kunye nezinye izibonelelo ezinomdla kwiSuku loSingles. Njengoko usazi kakuhle, iivenkile ezikwi-Intanethi zaseTshayina zibhiyozela umhla we-11 kuNovemba njengenye yeentsuku zezona ntengiso zinamandla kunyaka wonke, ezigqitha kakhulu ngolwesiHlanu oMnyama kuxhomekeke kwimiba ethile, oko kukuthi, uSuku lweeNgxoxo ikakhulu iimveliso zinikezelwa kwitekhnoloji, enje ngale Xiaomi Umshini 2.
Ukuyifumana ngale linki kwiwebhusayithi yeTomTop Ukuthunyelwa kuya kwenziwa kusuka eJamani, ke siya kuba nesiqinisekiso se-European Union. Esi sisizukulwana sesibini iMijia Roborock S50 yokucoca isicoci kuhlobo lwayo lwamanye amazwe. Isibonelelo sinqunyelwe kwiiyunithi ezingama-350 ezimhlophe kwaye sifumana inkqubo yokucoceka ekrelekrele esinokuthi siyilawule ngefowuni ephathekayo, kuba inesicelo, ukongeza kwinkqubo yayo yokutsala enamandla kunye nolungelelwaniso lwemop oluya kusivumela ukuba sikhuhle ngaphandle kokuphakamisa umnwe omnye. Esi sixhobo sokucoca uhlala ubiza phantse i-euro ezingama-500, kwaye ngeli xesha ikwiTomTop ukusuka kwi-euro ezingama-348 nje. Iphakheji ibandakanya isikhululo sokutshaja, i-mop, iadaptha kunye nesicoci sokucoca iibhlashi.
Olunye ulungiselelo lweTomTop loSuku lweeNgoma
IKoogeek Led Strip ukusuka kwi-24 euro.
Ikhadi le-SanDisk Ultra 128 GB le-microSD ukusuka kwi-euro ezingama-20.
Ezi zizibonelelo ezinomdla ukuze ukwazi ukukhawulezisa into encinci eseleyo yoSuku loSingles, nangona iTomTop izakube inikezela ngeemveliso ezinomdla kude kube ngo-Novemba 13 ozayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Xiaomi Vacuum 2 ye-348 euros kunye nezinye iiSunles zoMhla zinikezelwa kwiTomTop